2018 အတွက်အဆိုးဆုံးဂိမ်း: ဖော်ပြချက်နှင့်ဓာတ်ပုံနှင့်အတူထိပ်ဆုံး 10 ဦး - ဂိမ်းပြဿနာများ - 2019
2018 အတွက်ဂိမ်းကစားခြင်းစက်မှုလုပ်ငန်းက high-quality နဲ့တော်လှန်ရေးသမားစီမံကိန်းများကိုတွေအများကြီးကိုပေး၏။ သို့သော်အလားအလာဂိမ်းအကြားလုံလောက်စွာဂိမ်းကစားကျေနပ်နိုင်မသောသူတို့ကိုအရှိကြ၏။ ဝေဖန်မှုများနှင့်ဒေါသထွက်နေတဲ့တုံ့ပြန်မှုများ၏တရစပ်များစွာသောသွန်းလောင်းသဖြင့်, developer များဟာသူတို့ရဲ့ဖန်တီးမှုကိုအပြစ်လွတ်ခြင်းနှင့်မွမ်းမံဖို့တဟုန်တည်းပြေးပါပြီ။ 2018 ဆယ်အဆိုးဆုံးဂိမ်း bug တွေ, ဆင်းရဲသော optimization, ပျင်းစရာဂိမ်းနှင့်မည်သည့်အမွှေးအကြိုင်များ၏မရှိခြင်းကိုအောကျမေ့ပါလိမ့်မည်။
Decay ၏ပြည်နယ် 2
စူပါ Seducer: မိန်းကလေးများနှင့်ပြောဆိုရန်ကဘယ်လို
ကုမ္ပဏီ Bethesda ထပ်မံကျစီးရီး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အသစ်တစ်ခုလမ်းကြောင်းကိုရှာတွေ့ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ စတုတ္ထအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကယင်း၏ယခင်ရန်အလွန်ဆင်တူသည် RPG element တွေကိုနှင့်အတူသော singleplayer သေနတ်သမားပြနှင့်မဆိုတိုးတက်မှုမရှိဘဲအချိန် marking ။ အွန်လိုင်းဂရုမစိုက်တစ်ခုခုမှားသွားတယ်, ထိုကဲ့သို့သောမကောင်းတဲ့စိတ်ကူးပုံပေါ်ပေမယ့်အကောင်အထည်ဖော်မှုအဆင့်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ထပ်မံကျ 76 - ယခုနှစ်၏အဓိကစိတ်ပျက်စရာ။ ဂိမ်းဇာတ်ကြောင်း၏ဂန္ကြံစည်မှုစွန့်ပစ်, အပေါငျးတို့သ NPC ထွက်ခုတ်ဖြတ်, မြောက်မြားစွာအဟောင်းနှင့်အသစ် bug တွေထည့်သွင်း, စနျူကလီးယားစစ်ပွဲပျက်စီးကမ္ဘာပေါ်မှာရှင်သန်ရပ်တည်ရေး၏လေထုကိုဆုံးရှုံးခဲ့သည်။ အိုထပ်မံကျ 76, စီးရီးထဲမှာမပါဂိမ်းလဲကြပါဘူးဒါကြောင့်အနိမ့်ပြိုလဲခဲ့သည်။ developer များပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများ rivet ဆက်လက်ပေမယ့်ကစားသမားပြီးသားစီမံကိန်းအဆုံးသတ် ထား. , စီးရီးအပေါ်အချို့ကြောင့်သူတို့ရဲ့အားထုတ်မှု, အချည်းနှီးဖြစ်လိမ့်မည်။
ပင် Co-op mode ကိုမကယ်တင်ဘူးရှိရာအမှု
အဆိုပါ AAA စီမံကိန်းကိုဝင်ဖို့ပြင်ဆင်နေသည့်အခါကျွန်တော်အမြဲကြီးတွေနဲ့မော်ကွန်းတစ်ခုခုကိုမျှော်လင့်။ သို့သော် Decay2နိုင်ငံတော်, သုံးဆ-ဟေးထိုကဲ့သို့သောအမြင့်ဆုံးရာထူးတရားမျှတမပြုခဲ့မသာ, ထိုနည်းတူမူလထက်တစ်ခါတစ်ရံပိုဆိုးခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါစီမံကိန်းသည် - ဆုတ်ယုတ်ခြင်းနှင့်လတ်ဆတ်သောစိတ်ကူးများမရှိခြင်း၏တိုက်ရိုက်ဥပမာ။ အဟောင်းကိုဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများ၏စစ်ဆင်ရေးသမဝါယမရောခံခဲ့ရပေမယ့်ပင်သူအလတ်စားအရည်အသွေးမြင့်မှာ Decay2၏ပြည်နယ်ဆွဲထုတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ငြင်းပယ်လျှင်, ငါတို့သည်သင်တို့ဂိမ်းများစွာသောနာရီရစ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ရှိရာအကြောင်းအရာဂိမ်းအပေါ်အလွန်, monotonous ကာတွန်းကောက်နဲ့တော်တော်လေးမနာလိုသောရှိသည်။
Project မှစူပါ Seducer ခဲတဲ့ပါရမီဖြစ်ဖို့တောင်းဆိုပေမယ့်အများအပြားမှဆက်ဆံရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်မိန်းကလေးများနှင့်အတူဆက်သွယ်ရေး၏အဓိကအကြောင်းအတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့သလိုပဲ။ သို့သော်နောက်တဖန်ကအကောင်အထည်ဖော်မှုတက်ချုပ်ဖော်ပြ။ ကစားသမားများကထွက်လှည့်အတိုင်း, တစ်ဦးစရိုက်ဟာသနှင့် sexism နှင့်သေးငယ်တဲ့မူကွဲများအတွက်ရှာပုံတော်ဝေဖန် Uncomplicated pikapera Simulator ကို၏ခေါင်းအတွက်နောက်ဆုံးလက်သည်းဖြစ်ခဲ့သည်။
အံ့သြစရာကောင်းတာကအများကြီးဝေဖန်မှုများကြားမှအတွက်စီမံကိန်း၏ဒုတိယတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလာမယ့်တာရှည်မဟုတျဘူး: ခြောက်လအကြာတွင်မူလထက်ဝေးနည်းပါးလာအနုတ်လက္ခဏာပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဆောင်ခဲ့သောနောက်ဆက်တွဲ, ရောက်တော်မူ၏။
ဝဒေနာရှင်သန်မှု၌၎င်း, ထိတ်လန့်အတွက်နှစ်ဦးစလုံး, ဝေးဂန္ရှင်သန်မှုထိတ်လန့်နေ
ဒါဟာထူးခြားမကောင်းတဲ့ဒေပဌနာရန်အလွန်ခက်ခဲသည်။ ဒါကကိုယ့်စိတ်ကိုဆောင်ကြဉ်းခဲ့သည့်အကြီးအလားအလာနှင့်အတူစီမံကိန်းဖြစ်သည်။ ဝဠာ၏အမြင်အာရုံစတိုင်, ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ implants ဖြစ်လာဖို့နိုင်စွမ်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အယူအဆရေချိုးခန်း, - ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုတစ်ဆင်ဖိုနီသို့လှည့်နိုင်တယ်, ဒါပေမယ့်သူကအဆင်မပြေနဲ့ရယ်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ကစားသမား monotonous ဂိမ်းနှင့်ဂရပ်ဖစ် vyrviglaznuyu အကြောင်းကိုတိုင်ကြား။ ထိုအအားနည်းနေနှင့်ကိုက်ညီစီမံကိန်းများ၏အမျိုးအစား: ကအတော်လေးကြောက်စရာကြီးနှင့်ရှင်သန်မှုရှင်သန်မှုထိတ်လန့်သောဒဏ်ဍာရီဒါပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။ 100 39 - ကွန်ရက်စာမျက်နှာ Metacritic စီမံကိန်းအသုံးပြုသူများသည်, Xbox ၏နိမ့်ဆုံးခန့်မှန်းချက်ကိုချီးမြှင့်။
သေတ္တာကို developer များပင်အစောပိုင်း access ကိုအဘို့, အရှိဆုံးရေနံစိမ်းစီမံကိန်းကိုဖန်တီးဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြ
အစောပိုင်းလက်လှမ်းအတွက်တန်ဖိုးမရှိအပြစ်တင်ဂိမ်းနှင့်လွယ်ကူသောသွားကြဖို့ထိပ်ဒီလိုမျိုးအတွက်, ဒါပေမယ့် Atlas ကထည့်ပါ။ ဟုတ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ရေနွေးငွေ့အပေါ်အသှငျအပွငျ၏ပထမ နေ့မှစ. အမျက်ဒေါသနှင့်အတူပေါက်ကွဲဖို့သောင်းချီကစားသမားထောင်ပေါင်းများစွာ၏အတင်းအဓမ္မမူကြောင်းကိုရေနံစိမ်းနှင့်မပြီးဆုံးသေးသော MMO ဖြစ်ပါသည်: ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အချိန်ကြာမြင့်စွာပထမဦးစွာဂိမ်း, အဲဒီနောက် main menu ကိုရစေချင်ကြဘူး, ပြီးတော့တစ်ကြောက်မက်ဘွယ်သော optimization, အချည်းနှီးသောလောက bug တွေတစည်းပြ အခြားပြဿနာများတစ်ပင်လယ်။ ကျနော်တို့သာ Atlas ပြန်သွားဖို့ပျက်ကွက်တဲ့သူဂိမ်းကစား, သည်းခံခြင်းနှင့် developer များအဘို့အလိုရှိ၏နိုင်သည် - ကောင်းသောကံ။
အဆိုးဆုံးဂိမ်းများ၏စာရင်းသို့ရရန်လုံလောက်သော - လုံလောက်တဲ့စတိုင်, လုံလုံလောက်လောက်မတူညီကြဘဲ, လုံလောက်အောင်နက်ရှိုင်းမဟုတ်
ဘဝကြီးစွာသောစိတ်ကူးများအကောင်အထည်ဖော်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း developer များအကြားယခုနှစ်ဘေးဟုခေါ်တွင်စေနိုင်ပါတယ်။ သောတိတ်ဆိတ်မှုက Man ဒီဇိုင်း, လူ့ဦးခေါင်းစတူဒီယိုနှင့်အတူနာမည်ကျော်ရင်ပြင် Enix ဖွင့်, ငါတို့သည်ဂိမ်း၏အဓိကအင်္ဂါရပ်တစ်ခုနားပင်းသောဇာတ်ကောင်အာရုံကိုပေးဆောင်ပေမယ့်လုံးဝဂိမ်းအကြောင်းကိုမေ့လျော့ကြ၏။
အဆိုပါကစားသမားကိုအဓိကဇာတ်ကောင်အဖြစ်အတူတူပင်လမ်းအတွက်သူ့ကိုန်းကျင်ကမ္ဘာကြီးကိုရိပ် မိ. , ဒါပေမယ့်အသံမပြီးသားတင်းမာမှုတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ဖို့ထက်မူရင်းအင်္ဂါရပ်ပုံရသည်မှအစဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းပိုဒ်၏အလယ်တွင်ဖို့ပိုမိုနီးစပ်သည်။
ပင်မ storyline ဆက်ဆံရေးဇာတ်ကောင်ကသူ၏ချစ်သူကိုနှင့်အများစုအတွက်ကစားသမား screen ပေါ်မှာဘာတွေဖြစ်ပျက်နေတယ်ဆိုတာကိုနားမလည်ခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်တစ်ဦးမျက်နှာဖုံးများတွင်သူခိုး, မှုန်ဝါးနေပါတယ်။ developer များရှုပ်ထွေးနှင့်အတူဝေးလွန်းပြီပဲဖြစ်ဖြစ်, ထို့နောက်တကယ့်စိတ်ပျက်ဖွယ်ရာတစ်ခုခုကိုပြုလေ၏။ ကစားသမားဒုတိယဆုံ။
သင်နှစ်တွင်ရဲ့အကောင်းဆုံးဂိမ်းများ၏စာရင်းအတွက် EA ၏အားကစားကနေစီမံကိန်းကိုမြင်ကြပြီလျှင်အံ့ဩခြင်းမရှိကြနှင့်။ ဖီဖာ 19 နှင့်အတူမေတ္တာ၌တဦးတည်းနှင့်ညှာအတာမဲ့ဝေဖန်ယင်း၏သည်အခြား: ဟုတ်ပါတယ်, ကစားသမားနှစ်ဦးကိုစခန်းများသို့ခွဲခြားခဲ့ကြသည်။ နောက်ဆုံးကိုသင်ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်နှစ်မှတစ်နှစ်ရန်, နားလည်နိုင်ပါသည်, EA ၏ပြဿနာကနေကနေဒါအသစ်တစ်ခုကာတွန်း, လွှဲပြောင်းနဲ့ main menu ရဲ့မှတ်ပုံတင်ကို update လုပ်ဖို့က screwing နေဆဲအတူတူဘောလုံး Simulator ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောသစ်ကိုလွှဲပြောင်းညှိနှိုင်းမှုနှင့်ဇာတ်လမ်း mode ကိုအဖြစ်သိသာထင်ရှားသောအပြောင်းအလဲအထူးသဖြင့်ပထမဦးဆုံးရှိသည်မဟုတ်တဲ့သူတွေကိုမြောက်မြားစွာ script များ၏ညညျးညူ, ကစားသမားဖြည့်ဆည်းရန်လုံလောက်သောမဟုတ်ပါဘူး။ ဖီဖာ 19 ထိုသူတို့အဘို့သူကမုန်း။ ဇာတ်ညွှန်းသင့်ရဲ့ကစားသမားကိုပြန်အောင်ပြင်းထန်သောအစည်းအဝေးများ၏ရလဒ်ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်သည်, နှင့်ပြိုင်ဘက်ကစားသမားတစ်ဦး twaite shad အပေါ်တစ်ခုလုံးကိုကာကွယ်ရေးရှိခြင်း, တစ်လီယိုမက်ဆီနှင့်ရည်မှန်းချက်ဖြစ်လာဖို့မှုကိုခံလိုက်ရတယ်။ ဘယ်နှစ်ယောက်အာရုံကြော ... ကျိုး ... GamePad
မုတ်ဆိတ်မွေးဆူဖြိုးလူသိများလူအပေါင်းတို့၏စတိုင်အလွန် - စျေးကြီးတဲ့အထုပ်နှင့်အတူကုမ္ပဏီ၏ Valve ကနေဂိမ်းကတ် Paid ။ developer များဝဠာ Dota2ပေါ်တွင် အခြေခံ. စီမံကိန်းဖြန့်ချိခြင်းနှင့်လူကြိုက်များအွန်လိုင်းစစ်ပွဲကစားကွင်းပရိတ်သတ်များနှင့်ပြီးသား Hearthstone blizardovsky တိုက်ကျွေးကြသည်တဲ့သူတွေကိုဆွဲ, ဘဏ်ကိုချိုးဖျက်ဖို့တွက်ချက်ပုံရသည်ပါပြီ။ စက်ပြင်နှင့်ပြင်မညီမမျှ; ထွက်ပေါက်မှာအတူစီမံကိန်းကိုသို့မဟုတ်ပေးထားသော (မည်သည့်အပိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမရှိဘဲသာမန်ကုန်းပတ်စုဆောင်းမထားဘူး) ရှုပ်ထွေးမှုအရသိရသည်။
လူအတော်များများပုံ, အဓိက phobia ဖြစ်ပါသည်, အန်စာတုံးအတွက်အပြောင်းအလဲ၏ကြောက်လန့်
အလွန်ထူးဆန်းတဲ့, developer များက၎င်း၏လွှတ်ပေးရန်ရှေ့တော်၌ထိုစီမံကိန်းအား၏အရည်အသွေးအဘို့အ Pre-တောင်းပန်အခါ။ Battlefield အန်စာတုံးကို5တောင်းပန်များလွှတ်ပေးရန်ရှေ့တော်၌အလွန်ကစားသမားများကအုတ်အုတ်သဲသဲဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် developer များဂိမ်းထဲကအဟောင်း bug တွေကြောင့်ဖြတ်ဖို့နှောငျ့ယှကျမပေးခဲ့ပါဘူး, ဒါကြောင့်အခြားအရာအားလုံးအသစ်ကတစ်ဗူးကိုဆောင်ခဲ့သော, laggy multiplayer နှင့်အတူဦးနှောက်အာရုံကြောကစားသမားကို လုပ်. , သစ်ကိုလုံးဝဘာမျှမယ့်စီးရီးအတွက်မဆောင်ခဲ့ကြသည် - ငါတို့သည်နေဆဲ Battlefield 1, ဒါပေမယ့်အသစ်တခုထဲမှာ setting ကို။
အမာခံနည်းဗျူဟာတိုက်လေယာဉ်တစ်ဦးငြီးငွေ့စရာအလှည့်-based clicker သို့လှည့်ပြီးတာနဲ့
နည်းဗျူဟာအလှည့်-based ဂိမ်းခေတ်သစ်ကစားသမားကိုဆွဲဆောင်ကြပါဘူး။ ဒီအမျိုးအစားထဲမှာနောက်ဆုံးအောင်မြင်သောစီမံကိန်းတစ်ခု Xcom ဖြစ်လာခဲ့သည်ကား, မိမိကိုတုပကျော်ကြားမှုကိုရှာဖွေမည်မဟုတ်။ ထွတ်များမဟာမိတ်အဖွဲ့ - အလှည့်-based နည်းဗျူဟာဂိမ်း၏ဂန္စီးရီးအဖွဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်တစ်ဦးချင်းစီအရေးယူမှတဆင့်စဉ်းစား။ စစ်မှန်သောသည်သင်း ဖွဲ့. ၏အသစ်အစိတျအပိုငျး! လုံးဝကစားသမား relished ။ အဆိုပါစီမံကိန်းအားဝေဖန်သူများကကနေအနိမ့် ratings လက်ခံရရှိခဲ့သည်နှင့်ခါးဆစ်, ရုပ်ဆိုး, ဆိုးဆိုးရွားရွားပျင်းစရာနှင့် monotonous အပျော်တမ်း addon အဖြစ်လူသိများခဲ့သည်။ ဒါဟာစာရေးသူပန်းတိုင်ကို လိုက်. ကြောင်းမဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။
2018 ခုနှစ်တွင်ထိုအရပ်၌များစွာသောထိုက်တန်စီမံကိန်းများကိုခဲ့ကြသည်, သို့သော်အားလုံးမဟုတ်ကတိပေးဂိမ်းများကိုဝေဖန်သူများကနှင့်သုံးစွဲသူများ၏ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုဝင်ငွေနိုင်ဘူး။ တချို့ကကြောင်းလှည့်ဖြားမျှော်လင့်ချက်များမပေးအမြန်ဆုံးဖွစျလိမျ့မညျကိုမေ့လျော့နိုင်အောင်စိတ်ပျက်ဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့သာ developer များအမှားအပေါ်အလုပ်မလုပ်ခြင်းနှင့်လာမယ့် 2019 ခုနှစ်အတွက်ကွန်ပျူတာဖျော်ဖြေရေးတကယ်အရည်အသွေးမြင့်ဂိမ်းပရိသတ်တွေပေးရကြောင်းကောက်ချက်ချမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နိုငျသညျ။
ဗီဒီယို Watch: ခစအတက အကယဒမရပရငဆပပ Myanmar Motion Picture Academy Awards 2018 LIVE!! (နိုဝင်ဘာလ 2019).